အက်ဖ်/အေ-၁၈ စူပါဟောနက် - ဝီကီပီးဒီးယား
Boeing F/A-18E နှင့် F/A-18F Super Hornet တို့သည် McDonnell Douglas F/A-18 Hornet ကို အခြေခံ၍ အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ် ဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ် မျိုးကွဲများဖြစ်သည်။ F/A-18E တစ်ယောက်မောင်းဖြစ်ပြီး F/A-18F ကမူ မောင်းနှင်ရန် လူ၂ဦး လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် F/A-18C နှင့် D Hornet ထက်ပိုအဆင့်မြင့် သည်။
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်စုံသုံးတိုက်လေယာဉ်
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၁၉၉၅
၆၀၈+ (၂၀၂၀ အေပရယ်လ)
မက်ဒေါ်နယ်ဒေါက်ကလက် အက်ဖ်/အေ-၁၈ ဟောနက်
Super Hornet တွင်m 61 အမည် ရှိ၂၀ မီလီမီတာ အမြှောက်ံပါရှိသည်။ ။ အပိုလောင်စာဆီများကို ပြင်ပလောင်စာဆီကန်ငါးခုအထိ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး လေယာဉ်ကို ပြင်ပ လေမှ ဝေဟင်ဆီဖြည့်သည့်စနစ် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဝေဟင်ဆီတင်သင်္ဘောအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Super Hornet သည် မက်ဒေါ်နယ်ဒေါက်ကလက် အက်ဖ်/အေ-၁၈ ဟောနက်၏ ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်သည်။ တောင်ပံနှင့် အမြီးပုံစံဖွဲ့စည်းပုံသည် Northrop ရှေ့ပြေးပုံစံ လေယာဉ် P-530, c. 1965 တွင် ပေါ့ပါးသော Northrop F-5E (ပိုကြီးသော တောင်ပံ၊ အမြီးနှစ်တောင် နှင့် ထူးခြားသော ဦးဆောင်အစွန်းထွက် အမြစ်တိုးချဲ့မှု သို့မဟုတ် LERX) ၏ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။  နောက်ပိုင်းတွင် Northrop YF-17 "Cobra" အဖြစ် ပျံသန်းခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ပိုမိုကြီးမားသော McDonnell Douglas F-15 Eagle အား ဖြည့်တင်းရန်အတွက် ပိုမိုသေးငယ်၍ ရိုးရှင်းသော တိုက်လေယာဉ်ကို ထုတ်လုပ်ရန် အမေရိကန် လေတပ်၏ Lightweight Fighter (LWF) အစီအစဉ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ YF-17 သည် ပြိုင်ပွဲတွင် YF-16 ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ 
ရေတပ်သည် YF-17 အား ကြီးမားသော F/A-18 Hornet တွင် ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ကြီးမားပြီး ပိုဈေးကြီးသော အက်ဖ် ၁၄ ရေယာဉ်စုကာကွယ်ရေးကြားဖြတ်တပ်နှင့် လေကြောင်းသာလွန်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွင် ထမ်းဆောင်နေသော ဘက်စုံသုံးတိုက်လေယာဉ်များအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ . Hornet သည် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း တိုက်ခိုက်ရေးခရီး အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ကျယ်ဝန်းသော Hornet အယူအဆကို McDonnell Douglas မှ Hornet 2000 အဖြစ် 1980 ခုနှစ်များတွင် စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ Hornet 2000 concept သည် ပိုကြီးသော တောင်ပံနှင့် ပိုရှည်သော လေယာဉ်ကိုယ်ထည်ပါရှိသော အဆင့်မြင့် F/A-18 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လောင်စာဆီနှင့် ပိုမိုအားကောင်းသည့်အင်ဂျင်များကို သယ်ဆောင်ရန် ပိုရှည်သည်။  
စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပြီးဆုံး ချိန်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ် ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် တော်ရုံတန်ရုံ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှု ကာလကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရေတပ်ၑလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ သည် ပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မက်ဒေါ်နယ်ဒေါက်ကလက် အေ ၁၂ ပရိုဂရမ်သည် ပြင်းထန်သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အသုံးမပြုတော့သော ဂရူမန် အေ ၆ ကို အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။  ရေတပ် သည် Clean-sheet ပရိုဂရမ်အတွက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောချဉ်းကပ်မှုအဖြစ် ရှိပြီးသား ဒီဇိုင်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စဉ်းစားခဲ့သည်။ A-12 ၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့် McDonnell Douglas သည် "Super Hornet" (အစပိုင်းတွင် " Hornnet II " ကို 1980 ခုနှစ်များကအဆိုပြုခဲ့သည်)၊ F/A-18 ၏တိုးတက်မှုများသည် အောင်မြင်ခဲ့သည်၊  A-6 Intruder ကို အစားထိုးနိုင်ခဲ့သည်။ မျိုးဆက်သစ် Hornet ဒီဇိုင်းသည် လက်ရှိ F-14 များလောက် နည်းပညာမကောင်းဟု ယူဆထားသူများကို F-14 Tomcat ကိုအဆင့်မြှင့်ထားသော ဂရူမန် ၏ Quick Strike ထက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ 
VFA-143 "Pukin Dogs" F-14B နှင့် F/A-18E 2005
ထိုအချိန်တွင်၊ Grumman F-14 Tomcat သည် ရေတပ်၏ ပင်မလေကြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း သော တိုက်လေယာဉ်နှင့် ရေယာဉ်စု ကာကွယ်ရေး ကြားဖြတ်တပ် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Dick Cheney က F-14 ကို 1960s နည်းပညာအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး 1989 ခုနှစ်တွင် F-14D ဝယ်လိုအားကို သိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့ပြီး 1991 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုကို လုံးဝ မဖျက်သိမ်းမီ၊ မွမ်းမံထားသော F/A-18E/F ကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။   Tomcat ကို Hornet Carrier Air Wing ဖြင့် အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Vietnam War ace နှင့် အောက်လွှတ်တော်အမတ် Duke Cunningham က Super Hornet သည် လေကြောင်းသာလွန်ကောင်းမွန်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် သက်သေမပြနိုင်သော ဒီဇိုင်းတစ်ခုလို ဝေဖန်ခဲ့သည်။   ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ရေတပ်သည် လေတပ်၏ Lockheed Martin F-22 Raptor ၏ ရေတပ်ပုံစံဖြစ်မည့် Navy Advanced Tactical Fighter (NATF) ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။  NATF ၏ ဈေးသက်သာသော အစားထိုးတစ်ခုအနေဖြင့်၊ Grumman သည် Quick Strike ထက် F-14 အတွက် သိသိသာသာ တိုးတက်မှုများကို အဆိုပြုခဲ့သော်လည်း ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က ၎င်းတို့အား ကုန်ကျစရိတ်များလွန်းသောကြောင့် ပယ်ချခဲ့ပြီး ဈေးနည်းသော F/A-18E/F အတွက် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ 
F/A-18F Super Hornet (ဘယ်) နှင့် F/A-18A Hornet (ညာဘက်)
↑ ၁.၀ ၁.၁ "F/A-18 fact file." Archived 11 January 2014 at the Wayback Machine. U.S. Navy, 13 October 2006. Retrieved: 25 July 2011.
↑ Department of Defense Fiscal Year (FY) 2021 Budget Estimates: Navy Justification Book Volume 1 of 3, Aircraft Procurement, Navy Budget Activities 01–04။ U.S. Department of Defense (February 2020)။
↑ Northrop YF-17 Cobra။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Jenkins, Dennis R. F/A-18 Hornet: A Navy Success Story.
↑ ၆.၀ ၆.၁ "F/A-18E/F Super Hornet."
↑ ၈.၀ ၈.၁ Rogoway၊ Tyler။ TOP GUN Day Special: The Super Tomcat That Was Never Built။ jalopnik.com။ Rogoway, Tyler.
↑ F-14 Tomcat - Military Aircraft။
↑ Donald, David.
↑ FUTURE OF NAVAL AVIATION -- HON.RANDY'DUKE'CUNNINGHAM (Extension of Remarks - May 07, 1991)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဖ်/အေ-၁၈_စူပါဟောနက်&oldid=730371" မှ ရယူရန်
၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။